Ugcine esemisiwe owamaHawks | Isolezwe
Ugcine esemisiwe owamaHawks
Isolezwe / 9 November 2012, 10:45am / SIMPHIWE NDWANDWE neSAPA
OKHULUMELA ama-Hawks omisiwe, uColonel McIntosh Polela
UGCINE emisiwe emsebenzini izolo okhulumela uphiko oluzimele lwabaphenyi ngaphansi kwe-SAPS ama-Hawks, uMcIntosh Polela kulandela ukuphawula kwakhe enkundleni yezokuxhumana i-Twitter ngendlela eyachazwa ngokuthi ikhombisa ukudelela umculi uMolemo “Jub Jub” Maarohanye futhi ibukela phansi isikhundla asiphethe.
Umiswe izolo kodwa abaphathi bamaphoyisa behlulekile ukuchaza ukuthi umisweleni.
UBrigadier Phuti Setati, wamaHawks, uthe lolu daba ngolwangaphakathi ngakho ngeke baze badedele iminininmgwane eminingi.
Walile futhi ukuphawula ngombiko ophume ephephandabeni laseGoli, iBeeld, elibhale ukuthi ukumiswa kukaPolela kuqondene ngqo nomlayezo weTwitter lapho ayehlekisa ngomculi uJub Jub ngemuva kokulahlwa ngamacala okubulala.
Ngesikhathi Isolezwe lithinta uPolela izolo ntambama ubuze intatheli ukuthi emsebenzini wayo ziyakhulunywa yini izinto zangaphakathi nabantu bangaphandle.
Ngesikhathi etshelwa ukuthi ukumiswa kwakhe kuyadinga ukwaziwa wumphakathi ngenxa yokuthi usebenzela isikhungo sikahulumeni, uvele wavalelisa isigubhukane maqede wavala ucingo engacacisanga ukuthi kanti ngempela yini lena eyenze wamiswa.
UPolela wabhala kwi-Twitter ngemuva kokuphuma kwesigwebo lapho ayebika khona ukuthi uJub Jub uzoqeda ubusuku bakhe bokuqala ejele, wenqatshelwe ibheyili ngemuva kokulahlwa ngamacala okubulala, ukuzama ukubulala nokushayela edle izidakamizwa.
Ngemuva kwesikhashana uPolela wabuye waqubuka futhi kwiTwitter lapho wabhala wathi: “Ngethemba ukuthi abalandeli bakaJub Jub bamnikeze ujeke kaVaselina ukuze awuphathe ejele.”
Wabuye waxolisa uPolela ngokubhala lokhu kwiTwitter wathi ubezikhulumela nje engaqondile ukuhlukumeza abathile. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa kwabuye kwaqubuka abakwa-Nando’s ngesikhangiso sabo lapho babesebenzisa okwashiwo nguPolela ukudayisa imikhiqizo yabo.
UPolela waqashwa ngemuva kokuhlala isikhashana engasebenzi kulandela ukuphuma kwakhe kwa-SABC kanti phambilini wayesebenza e-eNews osekuyi-eNCA esakazela namazwe angaphandle.
Usanda kubhala incwadi egeqa amagula ngempilo yakhe noyise ethi My Father My Monster.